Ny finoana araka ny Baiboly
Ny Finoana araka ny Soratra Masina na araka ny Baiboly dia tsy ilay anaram-piangonana mahazatra ny sofina.
Raha vao miresaka Finoana dia miditra avy hatrany amin'ny resaka tontolon'ny fanahy. Izany hoe tsy ara-nofo.
Ny finoana tiana horesahana amin'ity toriteny ity dia ny finoana izay miorina eo ambonin'ny Teny fikasan'Andriamanitra. Tsy maintsy fantatra tsara noho izany, hoe iza tsara aloha Ilay Andriamanitra izay inoana.
Misy olona modelina finoana maromaro ao amin'ny Baiboly. Ohatra : Abrahama, Noa, Sadraka sy Mesaka ary Abednego ....
6 Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy ; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy. 7 Finoana no nanamboaran’i Noa sambo fiara hamonjena ny ankohonany, fa natahotra izy, rehefa notoroan’Andriamanitra hevitra ny amin’ny zavatra tsy mbola hita ; koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana.
1 Ary hoy Jehovah tamin’i Abrama : Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao ; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao ; ary ho fitahiana tokoa hianao ; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao ; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. 4 Dia nandeha Abrama araka izay efa nolazain’i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy.
27 Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.